Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba Ezintsha » Philippines Izindaba Ezintsha » UMongameli wasePhilippines uyayeka ezombusazwe
Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Izindaba zikaHulumeni • Human Rights • Izindaba • Abantu • Philippines Izindaba Ezintsha • Ezokuvakasha • Ukuvuselelwa Kwendawo Yokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • ezithrendayo Manje
Kubalulekile ukuthi uDuterte abe nomlandeli othembekile ukuze amvikele ezenzweni zomthetho - ekhaya noma yiNkantolo Yezobugebengu Yomhlaba Wonke - ezinkulungwaneni zokubulawa kukahulumeni empini yakhe yokulwa nezidakamizwa kusukela ngo-2016.
UMengameli wasePhilippines uRodrigo Duterte umemezele namuhla ukuthi usethatha umhlalaphansi kwezepolitiki.
Abagxeki abaningi kanye nochwepheshe bezepolitiki ePhilippines nakwamanye amazwe babheka isimemezelo sikaDuterte ngokungabaza.
Abahlaziyi bezepolitiki ePhilippines nakwamanye amazwe bathi lesi senzo sikaDuterte singahle sicacisele indodakazi yakhe ithuba lokungenela lesi sikhundla.
Isenzo esimangazayo esabhebhezela ukuqagela ukuthi wayevula indlela yokuba ngumengameli ophethwe yindodakazi yakhe, umholi wasePhilippines owayengundabuzekwayo uRodrigo Duterte umemezele namuhla ukuthi ngeke alungenele ukhetho luka-2022, kodwa esikhundleni salokho uzothatha umhlalaphansi kwezepolitiki.
Isinqumo sikaDuterte sokushiya lo mjaho singase sivulele indlela indodakazi yakhe uSara Duterte-Carpio ukuthi alwele lo msebenzi ohamba phambili kuleli.
U-76 oneminyaka engu-ubudala ubudala Duterte, oke waba ngumongameli we Philippines kusukela ngo-2016, akavumelekile ukufuna elinye ihlandla okhethweni lobumengameli lwangonyaka ozayo, kepha angangenela ukhetho lokuba yiphini likamongameli wezwe okhethweni lwangonyaka ozayo.
Yize iqembu lakhe elibusayo i-PDP-Laban esikhundleni sakhe liqoke uDuterte esikhundleni sokuba yiphini likamongameli, limemezele ngoMgqibelo ukuthi ngeke angenele ukhetho lwe-VP, ethi lesi sinqumo senziwe ngenxa "yezifiso zomphakathi."
"Namuhla, ngimemezela ukuthatha umhlalaphansi kwezepolitiki," esho, evela esikhungweni seKhomishini Sezokhetho enhlokodolobha iManila kanye noSenator uChristopher 'Bong' Go, owayebhalisela ukuba yiphini likamengameli esikhundleni sePDP-Laban.
"Umbono omkhulu wabantu basePhilippines ngukuthi angifaneleki futhi kungaba ukwephula umthethosisekelo ukugwema umthetho, umoya womthethosisekelo" ukungenela iphini likamongameli, waphikelela.
DuterteIsinqumo sokuphuma kulo mjaho singase sivulele indodakazi yakhe uSara Duterte-Carpio ithuba lokungenela lo msebenzi ohamba phambili kuleli.
Phambilini uDuterte-Carpio wathi wayengeke afune isikhundla sikamengameli ngoba wayevumelene noyise ukuthi munye kuphela wabo ozobamba iqhaza okhethweni lukazwelonke ngoMeyi 9, 2022. Ukungabikho kukaDuterte esivotweni manje kungamvumela ukuba angene umjaho.
Kwenzeka lokhu nje, lo mfana oneminyaka engu-43 ubudala wangena esikhundleni sikayise njengemeya yaseDavao City lapho Duterte waba ngumongameli wasePhilippines eminyakeni emihlanu edlule. Ubuye waba yinhloko yedolobha phakathi kuka-2010 no-2013.